Daawo Sawirada : Barnaamishka Baro Dariskaaga Oo Ka Socda Gobalka Banaadir – Radio Muqdisho
Daawo Sawirada : Barnaamishka Baro Dariskaaga Oo Ka Socda Gobalka Banaadir
Maamulka Gobalka Banaadir oo muddooyinka ku howlan sidoo loo xaqiijin lahaa sugidda Ammaanka Magaalada Muqdisho ayaa bilaabay Olole loogu Magacdaray Baro deriskaaga.
Ololaha ayaan loogu talagalay in xaafad xaafad iyo sida ay degmooyinka daris u yihiin in la isugu xogro dadeynaha ku nool magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ka qeybgalay mid kamid ah Barnaamishyada loogu talalagalay in ay isku bartaan dadweyne laga ka kala socday degmooyinka Shibis, Kaaraan Iyo Heliwaa kaas oo lagu qabtay Degmada Yaaqshiid ee Gobalka Banaadir.
Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ayaa kulanka keeshay in Amaanka Gobalka Banaadir uu Barnaamishkan Ahmiyad gaar ah u leeyahay loona baahanyahay in si dhab ah looga wadashaqeeyo.
sidoo kale guddoomiyaha gobalka banaadir ayaa Kormeer Howleed ku tagay Degmada Hodan, isagoo u kuurgalayay wadashaqeynta maamulka degmada iyo laamaha Ammaanka.
Xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay inay baarayaan falkii AMISOM ay ku dishay dad rayid ah